HomeWararka MaantaPele Innankiisa Oo 33 Sanno Oo Xabsi Ah Lagu Xukumay
Edinho – oo 10 sanno ka hor ayaa ciyaaryahan ka u ciyaara kooxda Santos ee ka dhisan wadanka Brazil, ayaa lagu cadeeyey inuu lacagta daroogada ka soo baxda u kala gudbiyo dadyow kala duwan oo ku mamay ka ganacsiga maandooriyaha.
Edinho Pele oo ah wiilka uu dhallay pele ayaa 33 sanadood liinta ku dhex cabi doona xabsiga gudihiisa
Warkan uur xumada ah ayaa soo if bixiisu masiibo hor leh ku yahay halyeyga reer Brazil ee aabaha u ah ee Pele.
Inna Pele ayaa maxkamada horteeda ka qirtay inuu yahay qof ay jiidatay isticmaalka daroogadu , laakiin wuxuu si weyn uga qayliyey oo ku celceliyey inuu beri ka yahay dacwada horseeday xukunkiisa ee dilaalka gudbiyaha lacagaha khaldan.
43 jirkan oo dhawr jeer oo horena xabsi u gallay maandooriye daraadii , ayaa wakhti xaadirkan ahaa tababaraha goolhaye-yaasha kooxda Santos.
Sida ay ku waramayso warbaahinta wadanka Brazil , waxaa si weyn loo rajaynayaa in xukunkan uu racfaan ka qaadan doono inna pele.
Waalli-cas: Iniesta Oo La Barbar dhigay Geed
Wa la yab